भीमेश्वरवासीकाे चाहना, नवनिर्माण र पुन:स्थापना |
भीमेश्वरवासीकाे चाहना, नवनिर्माण र पुन:स्थापना
प्रकाशित मिति :2017-05-08 13:12:14
को हुनुहुन्छ दोलखास्थित भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार भरत केसी ?
भीमेश्वर नगरपालिका दोलखामा मेयरको उमेदवारका रूपमा नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी दोलखाले भरतबहादुर केसीलाई सर्वसम्मत रूपमा छनोट गरेको छ । ‘भीनपामा मेयर उम्मेदवार एमालेको भरत केसी सिफारिस गर्नु नै यो नगरको मेयर केसी नै बन्नु हो,’ भन्ने दोलखाली राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । भीनपामा एमालेको शक्तिशाली संगठन र अन्य दलहरूको कमजोर उपस्थितिका कारण एमालेको उम्मेदवार नै मेयर बन्ने निश्चित छ भन्ने उहाँहरूको ठम्याइ छ । एमालेका तर्फबाट १२ जना आकांक्षीमध्ये केसीलाई पार्टीले टिकट दिएको छ । एमालेको जिल्ला सचिवालय सदस्य रहनुभएका भरत केसी पार्टीभित्रका प्रभावशाली नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । उहाँ वास्तवमा को हुनुहुन्छ ? यतिबेला सबै भीनपावासी र आमजनताको चासो विषय रहेकोे छ ।
भरतबहादुर केसी २०२२ भदौ ७ मा दोलखा जिल्लाको तत्कालीन चरिकोट गाविसस्थित रामकोटमा पिता चन्द्रबहादुर केसी र माता कृष्णकुमारी केसीको जेठा सन्तानका रूपमा जन्मनुभएको हो । सानैदेखि तीक्ष्ण बुद्घि र चतुर स्वभावका केसी पढाइमा पनि प्रतिभाशाली विद्यार्थी हुनुहुन्छ । श्री भीम माध्यमिक विद्यालय दोलखामा अध्ययन गरेका केसीले १४ वर्षको उमेरदेखि राजनीति सुरु गर्नुभएको हो । २०३६ सालमा अनेरास्ववियुको संगठनबाट राजनीति सुरु गरेका उनी २०३८ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि नेपाल ल क्याम्पस काठमाडौंमा अध्ययन र राजनीतिलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुभयो । स्नातकसम्मको अध्ययन सम्पन्न गरी कुशल अधिवक्ता बनेर उहाँ २०४५ सालमा जन्मभूमि चरिकोट फर्कनुभयो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै केसीले आफ्नो राजनीतिक यात्रा अघि बढाउनुभयो । २०४८ सालमा नेकपा (एमाले) गाउँ कमिटी चरिकोटको सचिव (प्रमुख) बन्दै संगठनको कामलाई अघि बढाउनभएका उहाँ २०४९ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा चरिकोट गाविसको अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभएको थियो । त्यो निर्वाचनमा पराजय बेहोर्नुपरे पनि पार्टी कामलाई अझै सशक्त ढंगले अघि बढाउनुभयो । पार्टीको इलाका कमिटी हँुदै २०५० सालदेखि जिल्ला कमिटीमा रहेर प्रचार विभागलगायत अन्य विभागीय जिम्मेवारी सम्हाल्दै हाल जिल्ला कमिटीको सचिवालय सदस्य र क्षेत्र नम्बर २ इन्चार्ज रहनुभएको छ । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नगर सभा सदस्यमा निर्वाचित भई उहाँ जिल्ला विकास समिति दोलखाको सदस्य बन्न सफल हुनुभयो ।
पार्टी विभाजनका बेला सतीसालजस्तै भएर पार्टी संस्थापनका पक्षमा उभिएका उहाँसँग शिवप्रसाद भण्डारी पार्टी जिल्ला सचिव (प्रमुख) रहेका बेला कार्यवाहक सचिवका रूपमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव पनि छ ।
बहुमुखी प्रतिभाका व्यक्तित्व केसी राजनीतिका अतिरिक्त गायन, नृत्य, खेलकुद, प्रहसनलगायतका विधामा पनि पारंगत हुनुहुन्छ । उहाँको यो क्षमता देखेर पार्टीले यी क्षेत्रमा पनि भूमिका दिएको थियो । उहाँ एमालेको भ्रातृ संगठन जनसांस्कृतिक मञ्च दोलखाको दुई कार्यकाल सचिव र दुई कार्यकाल अध्यक्ष बन्नुभयो । त्यस्तै, हाल उहाँ एमालेकै अर्को भ्रातृ संगठन नेपाल खेलकुद महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष र प्रदेश नम्बर ३ का प्रमुखसमेत हुनुहुन्छ ।
पेसाका हिसाबले अधिवक्ता रहनुभएका केसीले सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न फोरममा समेत रहेर आफ्नो सफल भूमिका देखाउनुभएको छ । नेपाल बार एसोसियसन दोलखा इकाइको संस्थापक सदस्य, तीन कार्यकालसम्म अध्यक्ष बनेर बारको संस्थागत छविलाई उहाँले उँचो बनाउनुभएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि उहाँको चासो र लगाव छ, गौरीशंकर बहुमुखी क्याम्पसको सञ्चालक समिति सदस्य बनेर शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गर्नुभएको छ । कुशल वक्ता, निर्भिक व्यक्तित्व केसीको उम्मेदवारीले भीमेश्वर नगरमा नयाँ तरंग सञ्चार भएको छ । उहाँका अगाडि थुप्रै अवसर र चुनौतीहरू छन् ।
सबैखाले चुनौतीको सामना गर्न सक्ने व्यक्तित्वका धनी केसीबाट सबैले आशा राखेका छन् । भीनपामा चरिकोट बजार व्यवस्थापन, पर्यटन प्रवद्र्धन, जलविद्युत् विकास, खरीढुंगा म्याग्नेसाइटको व्यवस्थापन, फिल्म नगरी निर्माण, नगरमा रिङरोड, खानेपानीको व्यवस्थापन, कृषि, उद्योग, व्यापारको प्रवद्र्धन, ग्रामीण सडक व्यवस्थापन, रोजगारीको सिर्जना, शैक्षिक विकासजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा उहाँको कार्यकुशलता, दूरदर्शिता र नेतृत्व हेर्न बाँकी छ ।
के भन्नुहुन्छ उपमेयरकी उम्मेदवार कमला बस्नेत ?
भीमेश्वर नगरपालिका (भीनपा) दोलखामा नेकपा (एमाले) को तर्फबाट उपमेयरको उम्मेदवार बनेकी कमला बस्नेत भीनपा वडा नम्बर ५ माटीमा २०२६ सालमा जन्मनुभएको हो । पिता मानबहादुर र माता चन्द्रकुमारी बस्नेतको सामान्य परिवारमा जन्मनुभएकी कमला सानैदेखि अध्ययनशील, परिश्रमी र लगनशील विद्यार्थीका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । सामाजिक काममा सानैदेखि सक्रिय कमला, विद्यालय तहको अध्ययनदेखि नै अनेरास्ववियुको राजनीतिमा लागिपर्नुभएको थियो । राजनीतिक र सामाजिक रूपमा क्रियाशील हुनुका साथै महिला पनि हुनुभएकाले कमला छोटो समयमै दोलखामा स्थापित व्यक्तित्व बन्न सफल हुनुभयो । बीएडसम्मको अध्ययन पूरा गर्नुभएकी कमला पढेलेखेकी, सचेत, भद्र र कुशल र सबैले मन पराउने नाम बन्न सफल हुनुभएको छ ।
२०४८ सालदेखि आफ्नै गाउँमा महिला जागरण समूह खोलेर गाउँमा जुवातास मुक्त अभियान सञ्चालन गर्नुभएको थियो । २०५०÷५१ सालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता संरक्षण समूहमा सक्रिय भएर २०५३÷५४ देखि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दोलखाको समितिमा रहेर यो क्षेत्रका जनताको आर्थिक सामाजिक विकासमा तल्लीन हुनुभएको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल दोलखाकी सदस्य, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, महासचिव हुँदै अहिले अध्यक्षको भूमिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
यसका अलावा गैरसरकारी संस्था महासंघ दोलखाकी सदस्य, महिला सहयोगी संस्था हिमवन्ती नेपालकी जिल्ला सचिव साथै सिँचाइ जलउपभोक्ता महासंघ नेपालकी केन्द्रीय सचिवालय सदस्य, बाग्मती अञ्चल अध्यक्ष समेत रहनुभएको छ । यसरी विभिन्न फोरममा सक्रिय कमलालाई अब उपमेयरको पद चलाउन पनि गाह्रो नहुने देखिन्छ ।
नेकपा (एमाले) को राजनीतिमा तत्कालीन भीनपा–८ माटीको वडा कमिटीको सदस्य हुँदै २०६३ सालबाट उहाँ सक्रिय रूपले लाग्नुभएको हो । यसैगरी, वडा कमिटीमा एमालेकै भ्रातृ संगठन अनेमसंघकी अध्यक्ष, भीनपा नगर कमिटीकी सदस्य र २०६५ मा अनेमसंघ भीनपा कमिटीकी अध्यक्ष हुँदै जिल्ला कमिटीको सदस्य बनेर हाल अनेमसंघ जिल्ला अधिवेशन आयोजक कमिटीकी सहसंयोजक रहनुभएको छ । पार्टी संगठनको मूलाधारमा सक्रियता देखाउँदै नेकपा (एमाले) को क्षेत्रीय कमिटी क्षेत्र नम्बर २ को सदस्य हुँदै हाल जिल्ला कमिटीको वैकल्पिक सदस्य हुनुहुन्छ ।
पूर्णकालीन रूपले आफ््नो जीवन पार्टी काम र सामाजिक क्षेत्रमा होमेकी कमलालाई घरपरिवारको राम्रो समर्थन रहेको छ । दोलखाकै मेलुङ गाउँपालिकामा विवाह गरे पनि भीनपामै रहेर सक्रिय राजनीति गरिरहेकी उहाँलाई सामाजिक काममै लागिरहन श्रीमान् नवराज खड्काले हौस्याइरहनुहुन्छ ।
यसपालिको चुनाव जितेर विशेष गरी पिछडिएका आमा, दिदी, बहिनी, शोषित पीडित वर्ग, समुदाय र आम भीनपा वासीलाई चित्त बुझ्ने गरी चुस्त सेवा दिने प्रण गर्नुभएको छ । चाखलाग्दो कुरा त के छ भने उहाँका श्रीमान् नवराज खड्का पनि मेलुङ गाउँपालिकामा वडा अध्यक्ष पदमा नेकपा (एमाले) कै तर्फबाट चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ । यो दम्पती चुनाव जित्ने लिस्टमा छ । यो ऐतिहासिक निर्वाचनमा दोलखामा पतिपत्नीलाई नै एमालेले टिकट दिएको छ भने दम्पती नै चुनावमा होमिएको यो पहिलो जोडी हो ।
– शरद सापकोटा